कास्कीमा अपराधका घटनामा कमी, निरन्तर सकृयताको परिणाम हो : एसपि कार्कि, “कुनैकुनै पेट्रोल पम्प होईनन्, पेट्रोल बम” – Online Annapurna
कास्कीमा अपराधका घटनामा कमी, निरन्तर सकृयताको परिणाम हो : एसपि कार्कि, “कुनैकुनै पेट्रोल पम्प होईनन्, पेट्रोल बम”
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १४:२१ October 18, 2019 349 Views
सन्देश श्रेष्ठ/दीननाथ वराल
पोखरा, कार्तिक १जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कास्कीमा अपराधका घटनामा कमी आएको दाबी गरेको छ । प्रहरीको सकृयताका कारण अघिल्ला महिनाहरुको तुलनामा कास्कीमा अपराधीक घट्नामा कमी आएको कास्की प्रहरीले दाबी गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) दानबहादुर कार्कीले भने,‘तुलनात्मक रुपमा अपराधीक घट्नामा कमी आएको छ, यो हाम्रो निरन्तर रुपमा भइरहेको गतिविधि र सकृयताको परिणाम हो ।’ यद्वपी यो स्थायी रुपमा हो वा क्षेणिक भन्ने बारेमा भने आगामी महिनाको परिणामले बताउने एसपी कार्कीले बताए ।
कास्की प्रहरीका अनुसार साउनमा १६१ वटा र भदौमा १७३ वटा अपराधीक घट्ना भएका थिए । तर असोजमा १२९ वटा मात्रै अपराधीक घट्ना भए । यसरी हेर्दा भदौ महिनाको तुलनामा कास्कीमा २५.४३ प्रतिशतले अपराधीक घट्नामा कमी आएको एसपी कार्कीले बताए ।
कास्कीमा लागूऔषध कारोबारीका घट्नामा पनि कमी आएको छ । कास्की प्रहरीले दिएको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा साउनमा ४४ जना र भदौमा ६१ जना लागूऔषध कारोबारी पक्राउ परेकोमा असोज महिनामा २२ जनालाई पक्राउ गरिएको एसपी कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौको तुलनामा असोजमा ६०.८६ प्रतिशतले कमी आएको छ । नियमित जाँचको प्रभाव स्वरुप घट्नामा कमी आएको एसपी कार्कीको दाबी छ ।
त्यस्तै चोरीमा पनि कास्कीमा कमी आएको छ । साउनमा ५ वटा चोरी भएको कास्कीमा भदौमा बढेर १३ पुगेपनि असोजमा आएर ७ वटा मात्रै चोरीका घट्ना भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । भदौको तुलनामा असोजमा ४६ प्रतिशतले चोरीका घट्नामा कमी आएको एसपी कार्कीले बताए । भदौमा वडा कार्यालयमा चोरी गर्नेलाई पक्राउ गरेसँगै चोरीका घट्नामा कमी आएको उनको भनाई छ ।
कास्की प्रहरीले असोजमा ८१ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रहरीले ति पक्राउ परेकाहरुको साथबाट ९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको एसपी कार्कीले जानकारी दिए । यसअघी भदौ महिनामा प्रहरीले ११ खालबाट ५ लाख ५९ हजार र साउनमा १२ खालबाट ५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको उनले बताए ।
पछिल्लो क्रममा सहरमा भन्दा गाउँमा गएर जुवा तास खेल्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसलाई पनि निगरानीमा राखेर अप्रेसन अभियान चलाइएको बताए । कास्की प्रहरीले चाँडपर्व लक्षित ट्राफिक जाँच गर्दा ४ हजार ८ सय जनालाई कार्वाही गरेर ३६ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको एसपी कार्कीले जानकारी दिए ।
कास्की प्रहरीले विद्यालय र अस्पताल वरपरका सटरहरुमा मदिरा बिक्री गर्नेबिरुद्ध अभियान चलाएको छ । पहिलो चरणमा विद्यालयले निर्माण गरेका सटरहरुमा मदिरा बिक्री भएको पाइएकाले सो नियन्त्रण गर्न अभियान चलाइएको एसपी कार्कीले बताए । उनले भने,‘विद्यालयका सटर तथा नजिकका पसलमा मदिरा बेच्दा विद्यालयको वातावरण नै धुमिलियो, त्यसैले सो बिरुद्ध अभियान चलाइएको हो ।’ उनले अस्पतालका सटर तथा नजिकका क्षेत्रमा पनि मदिरा बेचबिखनबिरुद्ध अभियान शुरु गरिने पनि बताए ।
पेट्रोल पम्प होइन, “पेट्रोल बम”
कार्कीले पोखरामा रहेका केही पेट्रोल पम्प पेट्रोल बमको रुपमा रहेको बताएका छन् । मासिक प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै एस.पी.कार्कीले मानव बस्ती र सडक छेउमै पेट्रोल पम्प हुनुले पोखराका केही ठाउँमा भएका पेट्रोल पम्प नै पेट्रोल बमको रुपमा रहेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले भने “पोखराको नयाँबजार, पृथ्बीचो, प्रस्र्याङ, नागढुंगा लगायतका ठाँउमै घरसंगै जोडिका पेट्रोल पम्पहरु रहेका छन, जोखिमका हिसावले ती पेट्रोलपम्प भने पट्रोल बमको रुपमा रहेकाछन्, यसको ब्यबस्थापनको लागि स्थानिय निकायले पहल गर्नुपर्छ, अन्यथा कुनै दिन पोखरामा ठुलो अविसाप हुनसक्छ ।” सुरक्षाको लागि पेट्रोल पम्पमा हुनुपर्ने फायर फाइटिङका कुरामा खासै ध्यान नदिएको, म्याद गुज्रिएका फायर फाइटिङका बस्तुहरु राखेको, हरेक तीन महिनामा फायर फाइटिङ सामान चुस्त दुरुष्त पार्नुपर्नेमा ख्याल नगरेको एस.पी.कार्कीले जनाए ।
पोखरा क्षेत्रमा संचालन हुने ट्याक्सिलाई अनिवार्य रुपमा मिटरमा संचालन गर्न आग्रह गर्दै एस.पी. कार्कीले अब मिटरमा संचालन नगर्ने पटकेको रुपमा परेका उपर त्यसको तथ्याङ राखेर कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस अघि पटकेको रुपमा कारवाहीको कुनै लेखाजोखा नभएकोले अब यसलाई आफुहरु र यातायात व्याबस्था कार्यालयबाट तथ्याङक राख्ने भएको उनले जनाए ।
पोखरामा माग्नेहरुको अर्को समस्या देखिएको एस.पी. कार्कीले जनाए । भारत देखि, नेपालका विरगन्ज, जनकपुर, नेपालगन्जबाट समेत माग्नेहरु पोखरामा देखा परेको पोखरा आउने पर्यटकहरुसंग रकम माग्नेले थप समस्या भएको उनले जनाए । उनीहरुलाई ब्याबस्थापन गर्न मानव सेवा आश्रम, विभिन्न क्षेत्रबाट आएकाहरुलाई बस राखेर पठाउन समेत सुरु गरिएको एस.पी. कार्कीले जनाए ।